म अलप हुन चाहन्छु भन्ने डोरबहादुर कहाँ छन् ?
Thu, Jun 21, 2018 | 08:22:28 NST
18:48 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, फागुन ५ – विश्व मानवशास्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय नाँचघर जमलमा बिहीबार मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको जीवनमा आधारित वृत्तचित्र म अलप हुन चाहन्छु प्रदर्शन गरिएको छ ।
‘मान्छेको जीवन मर्दा पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ । किन जलाउने ? किन गाड्ने ? सबैभन्दा उत्तम पाँच किलोको सामान जिउमा बाँध्ने, नदीमा हामफाल्ने । नदीमा भएका जिवले आफ्नो इच्छाअनुसार हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगहरु खान पाउन’ यसो भन्ने मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट अलप हुनुभएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । साच्चै उहाँले भनेजस्तै गर्नुभयो कि, फर्कनु हुन्छ डोरबहादुर विष्ट ? जुम्लाबाट बाँके जान्छु भनि २०५३ सालमा फागुनमा हिँड्नभएका विष्ट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुगेको कुरा वृतचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि कहाँ हराए विष्ट अहिलेसम्म अत्तो पत्तो नभएको कुरालाई कारुणिक रुपमा देखाइएको छ । भारतमा जोगीको भेषमा बसेको र केही नेपालीले भेटेको भन्ने हल्ला आएसँगै खोजी गर्दा पनि फेला नपरेकाले अहिलेसम्म मानवशास्त्री विष्ट कहाँ जानुभयो पत्तो नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
वृत्तचित्रमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन विष्टले गर्नुभएका विभिन्न प्रयाससँगै नेपालका आदिवासी जनजाति, विविध संस्कृति, समुदाय चिनाउन सफल हुनुभएका विष्टको योगदानको चर्चा परिचर्चा गरिएको छ ।
विष्टले जुम्लाको विभिन्न ठाउँमा गर्नुभएको समाज सेवालाई वृतचित्रमा उतार्ने जमर्को गरिएको छ । जुम्लामा स्कुल बनाउने, अंग्रेजी सरी पनि भन्न नसक्नेलाई साधारण अंग्रेजी बोल्न सक्ने बनाएको, त्यहाँका विभिन्न जातजातिमाथि गरिएका अुनसन्धानलाई वृतचित्रमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै भौतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा ब्राह्मणवाद र भाग्यवादको निष्कर्ष निकाल्ने विष्टको सिद्धान्तलाई वृतचित्रमा उतारिएको छ ।
नेपालको उत्तर पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलादेखि पश्चिमको कालापानीसम्म मानवशास्त्रीय अध्ययन गरकै कारण विष्ट ल्हासाका महावाणिज्य दूत भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०५२ फागुनदेखि बेपत्ता हुनुभएका विष्टबारे अलप हुनुका विभिन्न कारण पनि देखाउन खोजिएको छ । परिवारका सदस्यसँग पनि बेला बेला म अलप हुन्छु, मेरा लागि तिमीहरुले केही गर्नु पर्दैन, म तिमीहरुलाई दुःख दिन्न, मान्छे मरेपछि पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ किन जलाउनु ? किन गाड्नु ? जस्ता विष्टले बोलेका शब्दहरुलाई कारुणिक रुपमा वृतचित्रमा उतारिएको छ । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयका समकालीन विद्वानहरूले विष्टका बारेमा बोलेका भनाइहरूलाई वृत्तचित्रमा समावेश गरिएको छ ।
मानवशास्त्री विष्टको पिपुल अफ नेपाल, सबै जातको साझा फूलबारी, रिपोर्ट फ्रम ह्लासा, फेटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट आदि पुस्तकलाई वृतचित्रमा समावेश गरिएको छ । वृत्तचित्र म अलप हुन चाहन्छु को निर्देशन सचिन घिमिरे र गौरब केसीले गरेका हुन् । पाँच वर्ष लगाएर वृतचित्र बनाएको निर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो ।